Apple Watch wuxuu hoos ugu dhacaa qiimaha Mareykanka. Hada waa $ 199 | Waxaan ka socdaa mac
Saacadda Apple Watch waxay ku dhacdaa qiimaheeda gudaha Mareykanka. Hadda waa $ 199
Haddii aan xusuusanno oo aan la tashanno macluumaadka ku jira bogga rasmiga ah ee Apple, waxaan arki doonnaa in qiimaha saacaddiisa caanka ah wax laga beddelay dhowr bilood ka hor, ka dib markii uu furmay Maarso. Xilligaas, moodooyinka Apple Watch Sport waxaa hoos loo dhigay illaa $ 50, moodelkiisuna yahay 299mm wuxuu Mareykanka ka joogaa $ 38. Qiimo yar oo sax ah oo ka buun buunin yar, inkasta oo ay weli qaali ku ahayd aragtideena, gaar ahaan marka Isbaanishka ay weli tahay at 369 ama € 419, iyadoo ku xiran nooca aad rabto inaad iibsato, iyo in € 50 la dhimay, maxaa yeelay ka hor intaysan xitaa ka qaalisaneyn.
Tan dhexdeeda, dukaan Mareykan ah, Best Buy, Waxay doorteen inay hoos u dhigaan qiimaha xitaa inbadan, taas oo naga yaabisay, tan iyo markii aan sugeynay warka iyo xanta ku saabsan muhiimada Apple Watch 2. Hoos ku xusan dhammaan macluumaadka munaasabadda iyo waxa ay noogu dhigan tahay.
1 Apple Watch waligeed sidan raqiis ah ma noqon
2 Apple Watch 2 ma noqon doono mid ka qaalisan
Apple Watch waligeed sidan raqiis ah ma noqon
Sida ay tahay Dukaan sidan oo kale ah waligeen kuma malayn lahayn in saacadda tufaaxa la qaniinay ay ku jiri doonto qiimo aad u hooseeya, xitaa ma ahan nooca Ciyaaraha. Waana inaysan iyagu ahayn 250 ama 299 doolar. Waxaan ka hadlaynaa qiimo dhimis dhan 100 doollar, taas oo ah, saddexaad qiimaha asalka ah ee horey loogu yareeyay horaantii guga. Ugu dambeyntiina, waxaad ka heli kartaa Apple Watch 38-milimitir cusub oo noocyadeeda Sport ah $ 199, taas oo sarrifka lacagaha aan ka badnayn € 190. Qiimo aad u soo jiidasho leh oo shaki la'aan ka careysiin doonta dadka isticmaala ee iibsaday labadii ama seddexdii bilood ee la soo dhaafay.
Haa, sicir-dhimista waxay ahayd Best Buy, ee ma ahayn Apple Store. Haddii Apple wax badan hoos u dhigi lahayd waxaan ka hadli lahayn wax run ahaantii saameyn ku leh oo ka walwalsan jiilka soo socda. Haddii shirkaddu lafteedu awood u leedahay laba dhimis joogto ah oo is xigxigta, waxay ka dhignaan lahayd inaysan aaminin wax soo saarkeeda oo ay doonayso inay sida ugu dhakhsaha badan uga takhalusto. Ogaanshaha kuwa ka socda Cupertino sidaan ku garaneyno, waxaan u qaadan karnaa in inta udhaxeysa warkan iyo wararka xarkaha xirmaya ay sii deyn doonaan Apple Watch 2 aad ugu dhaqsaha badan, in kasta oo ay jiraan warar sheegaya in dib loo dhigi doono sababo la xiriira wax soo saarka iyo qaabeynta, Waa maxay dhacaya iPhone 7.
Intaas waxaa sii dheer, baahida loo qabo in qiimaha hoos loo dhigo waxay muujineysaa qodobo kale oo muhiim ah sida in suuqa uusan diyaar u aheyn inuu inbadan ku qarash gareeyo smartwatch. Taasi waxay saameyn ku yeelan doontaa Apple Watch 2 iyo qiimaheeda. Aad ayaan ugu feejigan nahay isbeddelada aan arki doono dayrta.
Apple Watch 2 ma noqon doono mid ka qaalisan
Marka hore waxay hoos u dhigayaan moodeelka bilowga ah, ka dibna mar labaad ayay hoos u dhigayaan, xitaa haddii uusan ku jirin dukaanka rasmiga ah. Haddii aan sidan ku sii socono, waxay ku dambayn doonaan inay sii daayaan iyagoo iibsanaya iPhone cusub, kaas oo aan noqon doonin fikrad xun sida dalab loogu talagalay ardayda, ka dib markii qiimaha oo dhan uu la mid yahay kan dhagaha lagu garaaco ee Beats. Weli waa iyaga xilli hore inay iyaga wax siiiyaan. Waxa aan arki lahayn waxay noqon lahaayeen a Apple Watch 2 oo qiimahoodu la mid yahay kan hadda lagu daydo, ugu yaraan nooca ugu jaban, ee Sport. Xarkaha iyo wixii laga yaabo inay ku kala duwanaan karaan, laakiin aaladda lafteeda ma awoodi karto inay ku kacdo qiime.
Isticmaalayaashu ma aysan iibsan jiilkii ugu horreeyay oo kaliya ma ahan inay sugaan tan labaad ee hagaajinaysa cilladaha iyo khaladaadka iyo hagaajinta, laakiin sababtoo ah qiimaha ayaa aad u sarreeyay. 400 euro saacad sidan oo kale ah ayaa aad ugu sareysa celceliska isticmaalaha, iyo in ka badan haddii aadan garanayn waxa lagu sameeyo ama haddii aad isticmaali doontid. Waxay noqon kartaa moodada iyo qalabka lagu raaxeysto, laakiin haddii aad isku daydo inaad hoos u marto dariiqaas, kuma guuleysan doontid inta isticmaaleyaasha ah ama kama adkaan doontid suuqa smartwatch.
Samsung waxay sii wadaa inay horumariso kaaga iyo shirkadaha kaleba si isku mid ah. Apple wuxuu leeyahay laba wadiiqo: Hagaajinta iyo ikhtiraaca illaa aan la yaabno, ama hoos u dhigno qiimaha xoogaa oo sii horumariyo qalabka. Haddii Apple Watch 2 wax uun ka ahayn hagaajinta kan hadda jira oo wata astaamo cusub, waxaan rajeyneynaa in qiimuhu ku sii nagaan doono $ 299, ama xitaa inuu hoos u dhici doono, maadaama aysan ahayn wax cusub ama cusub ahaa 1 sano kahor oo macnaheedu yahay, dhexdhexaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Saacadda Apple Watch waxay ku dhacdaa qiimaheeda gudaha Mareykanka. Hadda waa $ 199